Amaah Ganacsi Yaryar Shirkadaha Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Kobcinta Dhaqaalaha|Deeqaha Ganacsiga & Amaahda|Amaahda Ganacsiga Yaryar
Hindisaha Dhibcaha Ganacsiga Yaryar
Gobolka Washington wuxuu ka helay $ 19.7 milyan sharciga federaalka ee shaqooyinka yar yar ee 2010 si loo amaahiyo barnaamijyo hagaajinaya helitaanka raasumaalka ganacsiyada yaryar si ay u koraan oo ay u abuuraan shaqooyin cusub. La shaqeynta la-hawlgalayaasha gaarka loo leeyahay, gobolku wuxuu rajaynayaa in lacagahaas looga faa'iideysto dhammaadka sannadka 2016, isagoo u kaxeynaya illaa $ 150 milyan oo raasumaal cusub ganacsiyada yaryar ee Washington.
Barnaamijka Taageerada Dammaanadda
Barnaamijka Taageerada Dammaanadda (CSP) wuxuu ka caawin karaa ganacsiyada yaryar inay sugaan amaahda buundada illaa 18 bilood oo ay ku jiraan maalgelinta buundada SBA 504. CSP waxay dhigtaa deebaaji lacageed hay'ada amaahda oo ah kaalmo rahaam ah oo dheeri ah si ay uga caawiso deyn bixiyeyaasha inay oggolaadaan amaahda. CSP way sii wadi doontaa inay shaqeyso ilaa lacagaha looga faa iideysto iyadoo la raacayo tilmaamaha federaalka.
Craft3 waa Hay'ad Maaliyadeed oo Horumarin Maaliyadeed oo aan macaash doon ahayn (CDFI) oo la shaqeysay SBCI si ay amaah ugu sameyso ganacsiyada yaryar iyadoo diiradda la saarayo bulshooyinka aan adeegyada ka helin gobolka oo dhan Guud ahaan amaahdu waxay u dhexeysaa $ 250,000 illaa $ 5 milyan.
Sanduuqa W, oo ah $ 18.5 milyan oo maalgelin maalgashi, wuxuu maal-galiyaa sayniska marxaladda hore, biotech, aaladda caafimaadka, tamar kale, iyo shirkadaha teknolojiyada macluumaadka ee ka soo baxa jaamacadaha iyo xarumaha cilmi-baarista ee ku baahsan Washington. Ujeeddadu waa in lagu dhiirrigeliyo sameynta shirkadda iyo shaqo abuurista saldhigga weyn ee cilmi-baarista iyo horumarinta ee Washington. Lacagta qaata waa inay ku taalaa gobolka, siisaa raasumaal muhiim ah iyo abuurista fursado dhaqaale qaybaha muhiimka ah ee koritaanka. Ugu badnaan maalgashiga waa $ 500,000 halkii maalgaliye wareeg kasta.
Barnaamijka Helitaanka Raasamaalka
Barnaamijka Helitaanka Raasumaalka (CAP) ma aqbalayo codsi kasta oo amaahda ganacsiga yar yar xilligan.
Artisan Electric waa qandaraasle adeeg buuxa oo degaan iyo qandaraasle koronto ku takhasusay nidaamyada sawir-qaadista qoraxda ee dhammaan Puget Sound. Laga soo bilaabo 2007, Artisan wuxuu gacan ka geystey qaabeynta mustaqbalka tamarta aagga iyada oo la wacyigelinayo bulshooyinka, fudeydinta geeddi-socodka iyo abuurista xalka tamarta oo labadaba ah kuwo la taaban karo oo qurux badan
Milkiileyaasha Jason Williams iyo Evan Leonard waxay ogaadeen in markii ay ku fiicnaadeen iibinta, naqshadeynta iyo rakibidda, aysan si buuxda u fahmin dhinaca dhaqaalaha. Isu dheelitirnaan sarreysa oo soo noqnoqota, dusha sare iyo waxqabad la'aan ayaa ka dhigtay wax aan macquul aheyn in macaash la helo. Iyada oo gacan ka heleysa kantaroole cusub, way nadiifiyeen oo ay heshiiyeen maaliyaddii. Jason iyo Evan waxay u baahdeen raasamaal si ay u bixiyaan deynta, laakiin bangiyada dhaqameed ma caawin karaan. Farsamada3 awood.
Sheekada inteeda kale…
Waaxda Maaliyadda Mareykanka Soo gal Washington Maamulka Ganacsiga Yaryar Xafiiska Ganacsatada Yaryar iyo Haweenka Ka Qabashada Ganacsi Magaalada Washington Dhoofinta Washington Ganacsiga Caalamiga ah Xiriirada Adeegyada Gobolka